News Update | MyanmarEmbassy
Statement by H.E. U Thaung Tun, National Security Advisor to the Union Government of Myanmar at the ARRIA Formula Meeting of the Security Council on the Situation in Myanmar Co-hosted by France and the United Kingdom (13 October 2017)(Eng, Myan)
Report to the People by State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi (12 October 2017)
Statement by H.E. U Thaung Tun, National Security Advisor to the Union Government of Myanmar at the meeting on the situation in Myanmar in the United Nations Security Council (28 September 2017) (Eng, Myan)
Statement by Mr. Hau Khan Sum, Ambassador/ Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Myanmar at the 36th Session of the United Nations Human Rights Council Geneva (29 September 2017)
Statement by His Excellency U Henry Van Thio, Vice-President of the Republic of the Union of Myanmar, at the General Debate of the 72nd Session of the United Nations General Assembly, New York (20 September 2017)
Speech delivered by Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar on Government’s efforts with regard to National Reconciliation and Peace (Nay Pyi Taw, 19 September 2017) (Eng, Myan)
Press Statement, The Situation in the Rakhine State (11 Sep 2017)
Recent Terrorist attacks in Northern Rakhine State of Myanmar (29 August 2017)
Anti-terrorism Central Committee’s Order No. 1/2017 (25 August 2017)
Statement by H.E. Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar at the BRICS-BIMSTEC Outreach Summit (Goa, India, 16 October 2016) (Eng, Myan)
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အပါအ၀င် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီအပေါ် သီးခြားရွေးချယ်၍ ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် (၂၈) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းမှ စကားပြောကြေးနန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ မစ္စတာ တောမတ်စ်ကင်တားနာ်း
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လတ်တလော ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့နယ်ရှိ တောင်ပေါ်ဒုက္ခသည်စခန်း အခြေအနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် အစ္စလာမ်မစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် (၆၈) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ
President U Thein Sein deliveredaremark on the Report of the Rakhine Investigation Commission